Mayelana nesikole sethu - Isikole Sezilimi Eziphakathi, eCambridge
Eduzane kwesonto elihle lamatshe enkabeni yeCambridge
Ukuhamba ngezinyawo imizuzu engu-5 ukuya esiteshini sebhasi, ukuhamba imizuzu engu-20 ukuya esiteshini sesitimela
Mayelana neBritish Council Kuvunywa
Ukuhlolwa okulandelayo kufanele ngo-2021
Mayelana Nokuphathwa Kwezikole
Isikole siyiCharity ebhalisiwe (inombolo yokubhalisa ingu-1056074) enebhodi yama-Trustee esebenza ngokweluleka. UMqondisi Wezifundo kanye noMphathi Omkhulu babhekele ukusebenza kwansuku zonke kwesikole.
ICambridge idume emhlabeni wonke ngeNyuvesi yayo, umlando, ubuhle, ubuciko bemfundo nempilo yomfundi. Vakashela amakolishi futhi...	Funda kabanzi
Leli khasi lizobuyekezwa maduze ukuze likhombise uhlelo olusha esingalunikeza ngaphakathi kwemikhawulo yeCovid...	Funda kabanzi
Nakhu eminye yemisebenzi esenza njalo, ngokusho konyaka wonyaka. Abanye bakhona...	Funda kabanzi